Mai Chibwe VekwaZimuto: Mukadzi/murume anoita seasingaguti
Musi wekutanga kuita Orgasm (kutunda kwemukadzi parhoji)
Kuvarume hakuna chinonetsa. Musi waanotanka kuvata nomukadzi anotodiridzira mukadzi nokukasira, kureva kuti asvika pakunakigwa panobudisa urume hwake huchipinda mumukadzi.
Vakadzi vakasiyana neizvi kashoma kuti unoguta musi waunobviswa humhandara. Vakawanda vanoti akatanga kuvata nomurume anokwanisa kuita mwedzi yakawanda asina kumbosvikapo. Vamwe vanoita makore akawanda. Tikatarisa kuvanhukadzi vari muUSA, zvakanyogwa mubhuku rinohi THE BIG O zvinonzi pakutanga kwavo kuvata nevarume
47 % vakasvika pakunakigwa nengari yokuzvibatabata pasina umwe munhu
32% vakaita pakuvata nomurume nokupinzwa chombo
20 % vakaita kubva pakutamba nomurume pasina kupinzwa chombo
1% vakaita vavete hope varota vachiiswa nomurume.
Tinoonazve kuti munyika iyi vakawanda vanotanga kunakigwa vava nemakore 18-20. Asi vamwe vanozotaga kusvika pachinhanho ichi vava nemakore 40 kana kupfuura. Saka upenyu hwemunhu akadai anenge ava nenguva yakareba achivata nomurume asi zvisingaiti. Kweduwo tinavo vakawanda vava nevana kureva kuti vari kuvata nevarume vavo asi havana kumbosvikawo pachinhanho ichi.
Tikatarisa ma figure ezvikonzero zvomusi wekutanga izvo tinoona kuti muridzi ndiye anowanzozvinakira ega pa 47% apo. Zvinohizve kana iwe muridzi usingazivi zvinokusvitsa panzvimbo iyi, zvinonetsa kuti uzosvikapo wava nomurume. Kune vokwedu vakadhonza, hazvinetsi kuhwisisa kuti pakudhonza ukatanga uri mwanana (12-15years old) ndiyo nguva yaunenge wava kukurawo muviri, mazamu pamberi nokumera vhudzi pamberi. Ndiyo nguva yaunogaroita zemo uvete kana wakasvinura ukafunga zvokuiswa. Ndiyo nguva yokuti pakudhonza unokwanisa kutanga uchidhonza wopedzisira wazvimbirira wava nezemo wobva wazvibatabata wega. Ukazojaira kudaro unosvika panzvimbo iyoyo umwe musi zvokuti musi wekutanga zvinokuvhundusa asi unozodazve kuzviita wobva waramba uchidaro.
Pakuzowanikwa paya kana murume achikunonokera unokwanisa kusvika futi nemurume. Kana achikukasirira haukwanisi saka ndipo pokuti uri wega mubhavhu wozviitira. Murume ozopinzawo hake iwe watombozviitira wega. Kana uchigarosvika pakunakigwa uri wega, zvinoreva kuti masvikire acho ndeekuzvikwizirira pedo nebhinzi zvinova zvakasiyana nokupinzwa chombo nokukoirana nomurume. Manakire azvo akatosiyana uye echombo ari pasi nokuti pabhinzi ndipo pakaungana kunaka kwese. Saka kana wada kuwedzera kunakigwa nomurume unokwanisa kuti muvete mese woti uku murume ari kukoira uku iwe uri kukwizirira bhinzi. Zvakanakira kuti kana murume wako ari munhu wechimbichimbi, unonakigwa asati adiridzira.
Kune vanovata nevarume nguva dzese:
Tikatarisa vanhukadzi vese tinoona kuti panyaya yokunakigwa iyi zvinhu hazvina kumira zvakana. Tichitarisa panyaya yokuvata nomurume tinowana zvakadai
33% vanokwanisa kusvika pakupfidziswa nokuiswa nomurume nechombo mazuva akawanda. Pane ivava, vashoma vanoita pese pavanovata nomurume.
33% vanokwanisa havo kuzviita asi zvinoda kuti uku chombo chirimo, uku murume otanga amboita rimwe basa ozowedzerazve iye apedza, uye kuti iyewo mukadzi awedzere zviri kuitwa nomurume.
33% havatombosviki kwese uko chero zvodii nechombo.
Izvi zvinoreva kuti nyaya yedu inyaya inonetsa kuhwisiswa nevarume vedu zvokuti ukasagara naye pasi kumutsanangurira kuti zvako iwe zviri papi anokwanisa kungofunga kuti chombo ndicho chiororo izvo bodo. Chiororo kuziva muviri wako iwe muridzi.
Pavanhukadzi kuwanda kwevari kusvika panhu pedu apa kunowedzera nokukura kwavo. Tikaverenga vanozvikwanisa muvakadzi vapfuura makore 40 tinoona kuti vanosvika 70%. Saka kana wazvitadza uchiri mudiki hazvirevi kuti uchangogara wakadaro. Dzidza kuzviitisa kuti paunozovata nomurume ukasire kuita.
Dambudziko guru muvanhukadzi.
Ugino hwevarume nenyaya yemafambire ezvinhu izvi hunoitisa kuti vakawanda vedu vasambosvika panhu apa. Kozotizve isuwo kutya kudzidza kuzvinakira kunoitisa tisaziva kuti chii chinokwanisa kutisvitsa panyaya iyi. Zvino kana iwe usingazivi, murume wako asingazivi, anovata newe achingonakigwa ega iwe uchisara une zemo. Ndipo unohwa varume vakawanda vachipopota kuti sei vakadzi vavo vasinganyanyofarira kuiswa. Inyaya yokuti zuva rese raunovhurira murume unongo iswa urume wosiiwa une zemo, saka chawavhurira murume ipapo chii. Iye unotoona achinakigwa zvokuti.
Dambudziko kazhinji kukasirigwa. Murume anongoti kupinda nokutunda pamwepo. Vazhinji vedu tinoda kumborezviwa nokubatwabatwa nokuudzwa nyaya dzinonakidza nokuzoti murume apinda ombondinyemudza chombo ozoti pakukoira oitawo kana 7 minutes arimo mukadzi achihwa pane moyo. (vakawanda vanoda nguva inoita 10-20 munites muchimbomira murume otombobudisa chombo moramba muchitamba) Zvadaro murume ari mukati mukadzi ndiye dhiraivha anoziva zvinomuitisa asvike panhu pedu. Vanhu ava vakataurirana kwavari kuenda voenda vese zvinokwanisika kuti unosvika kwausati wambosvika
Pamwe unopinzwa chombo murume oitawo zvakanaka chose asi iwe wotadza kusvika nokuti hausi kuda kusvika. Hazvirevi kuti hauna kunakigwa. Zvinongoreva kuti hauna kunakigwa zvokusvika pakupedza. Kupinzwa chombo panguva yokuvata mambotamba mukambobatana, zvinoita munhukadzi ahwe ari pedo nomoyo wemurume wake zvichibva nemaisire amuri kuitana. Kungopinzwa momboita nyaya zvenyu uchihwa akapinda uchihwa chifuva chake achifema muchipota muchikisana, kunoita kuti uhwe rudo. Zvinonaka, uye dzimwe nguva mukadzi anenge asingadi kusvitswa pokupedzisira.
Todii kuzama kusvika paOrgasm?
Chokutanga ongorora kuti sei zvisingakuitiri. Kana wakambosvika, zvibvunze kuti wakasvika sei musi iwoyo? Chizama kushandisa mutowo iwoyo kusvika zvaitazve. Kana usati wambozviita, hwisisa kuti maitikire azvo akasiyana, zvimwe zviri INTENSE zvimwe ndizvowo hazvo. Hwisisazve kuti unokwanisa kungoerekana zvaitika uye pamwe zvinokuvhundusa kunaka kwazvo.
Rerusa muviri: (RELAX) ubatsirane nomurume pakuvatana kwenyu. Wega unohwa muviri wese uchidavira kuti chombo chiri mukati uye chiri kunaka. Ukada kumbotsinzina maziso woenda kune imwe nzvimbo inonaka kuisigwa ita. Rerusa muviri.
Gara usina zvauri kufunganya. Dzidza kuda kuiswa nomurume wako. Uye dzidza kutaura wakasununguka. Kana pane chaubaya moyo, chibudise pachena chitaugwe chipere.
Kuvhenganisa maitire enyu kunokwanisa kukuitisa Orgasm. Kana pane zvaunofunga kuti zvinoitwa nevane musikahwa imbozviita izvozvo iwe. Uchaona kuti zvinonaka iri nyaya ye Excitement. Sokuti une murume anoda kungokwira pamusoro, umwe musi muchitamba musina hembhe unomutsimbirira womukwira moita semuri kugwirana kuva pamusoro. womboindawo pamusoro.
Taura muchiita. Taura nemurume uchimuudza zvouita uye zvaari kukuita. Ramba ucitaura. Muudze manakire azvo. Kuiswa wakanyarara hakunaki.
Siyanisai nzvimbo. Ita musikahwa wenhunzi inoti kuti iri kudya nyama uku iri kupinzwa chombo. Toti uri mubhavhu murume ari kuona TV, unokwanisa kumudaidza ouya womuudza akugezzese musana. Akamira chombo nazvo muudze ashandise chombo.
Kusavhenganisa nyaya dzemumba nenyaya dzokuvatana chinhu chakanakawo hacho. Kana mune nyaya pakati penyu, musaitaura muimba yokuvata. imba iyi ndeyezvinhu zvorudo chete nokuva pamwe. Kuronga musha nokupopotedzana kunoitigwa muimba yokugara (living room)
Kutya kuvata nomurume kunoita usanakigwa. Toti murume akahurira ukamuregerera, unokwanisa kutya kuti achiri kuhura uye angangokupa chigwere. Nyaya dzakadai dzinokutadzisa kunakigwa. Kana murume ahura, muudze kuti regerero inotangira pakuti mese moendakuTEST moudzwa kuti hapana chamunacho mobva matanga kuisana muchizivi kuti mapukunyuka pazvigwere zvechihure.
Kuneta nemabasa kunokwanisa kuti ungozowana simba rokuti murume agute. Kungovhurira murume iwe usinei hako nazvo.
Kusimbisa masuro yechitubu kunobatsira kuti pakurhojana unokwanisa kusvinya chombo kukwiziwa nacho mukati kowedzera.
Varume vodii kuti mukadzi asvikewo?.
Varume chokutanga dzidza kutaura nomukadzi wako zvisina AUTHORITY mukati, kusvika pakuti kana muchitaura nyaya dzerhoji munge muri vanhu vaksununguka mese. Kusununguka uku kunosvika pakuti munoudzana zvinoitika mumiviri yenyu. Vakadzi tinoona zvichisvodesa kuudza murume kuti dzimwe nguva tinoshndisawo maoko. Zvinosvika pakuti kana murume akakusiya une zemo vakawanda vanotorera zemo kusvika murume abatwa nehope voita nemaoko murume asingazvioni. Kazhinji zvinoitwa seizvi kuti murume asaziva kuti atadza kupedzisa mukadzi.
Varume munofanirawo kudzidza mega kuziva kuti zvaita here kana kwete. Kana watadza kusvitsa mukadzi pakupedza zemo, unofanira kuziva wega kuti atandza saka panodiwa zvimwe zvinoitwa kuti asvike mese mugozobatwa nehope. Zemo romunhukadzi rinononoka kupera rega zvokuti pamwe hope hadziuyi kusvika waripedza.
Kuti upinze chombo mumukadzi, tanga waona kuti wambomukwidza zemo zvokuti anokasira kusvika pauri kuda kuti asvike. Izvi zvinoitwa nokutora nguva muchikisana, kubatana, kurezvana, etc. Madaro unombopinzawo chigumwe mukati wokwenyerera mukati nechokumusoro kwakananga kuguvu. Pane nzvimbo yakagwinya kubvuura dzimwe inova ndiyo inoti kana muchiita maitire mamwe chombo chikanokwizapo mukadzi anowedzera kunakigwa. Unombokwenyererapo kwenguva. Mukadzi anonakigwa nazvo.
Pakuzopinza unowana panyorova zvakanaka zvokuti ukawana mukana wekumunonokera anokwanisa kusvika pakupedza. Nyaya yokunonoka inonetsa varume vakawanda nokuti havadi kuzvidzidzira. Kunonoka chinhu chinodzidzika saka uchida kuti mukadzi wako akupe rukudzo panyaya dzerhoji, dzidza kunonoka.
Kusaita tsika nezviito zvonoshaisa mukadzi mufaro chinhu chakanaka kana uchida kuti anakigwe pakuvatana kwenyu. Mukadzi asina mufaro anonetseka kunakigwa. Vamwe varume havanei nokuda kugadzirisa nyaya dzinoitika mumba. Anoti imwe ichiripo otanga imwe futi. Vamwewo vanoda kugarorangaridza mukadzi kuti munhu asina maturo pamafungire avo. Murume akadaro anonetsa kunakigwa naye. Munhu itawo mukadzi wako ahwe ari munhu ane chiremera. Kana achitaura terera. Kana ukaona asina mufaro bvunza kuti zvaita sei. Achigwara imbomuriritirawo sezvaanoita iwe uchigwara kwete kungoti akagwara wofonera mai vake kuti vazoona zvokuita.
Kuva nechombo hazvirevi kuti unogona basa racho. Zvinodawo kuti uite nyanzvi pabasa.
Chitubu handicho mukadzi. Pane muviri wake wese unodawo kuziva kuti mumba mune murume, makumbo, magaro, dumbu, mazamu, huro, mafudzi, musana, musoro. Muviri wese unenge uchida kuziva kuti mumba mune murume.
Kusvitsawo rurimi pabhinzi yomukdzi wako zvinonaka chose. Varume, ukambobva kwawabva umwewo musi ukawana mukadzi wako akakumirira mumba, ukamubvunza kuti atogeza here, kana ageza iwewo wonogeza, wombomupa inohi Tongue bath muviri wese, wonomirira pabhinzi apo pa HQ yekunaka. wozoti waona kuti zviri kufamba sei wozoitawo hako zvokupinza chombo. Zvinonaka zvokuti kuitwa mazuva ese vamwe hatidi. Asi kamwe pavhiki maybe. Asi Orgasm hainonoki. Ndati hainonoki uye inouya ichiita sechitima chaicho. Bhinzi inonaka varume wee.
Kana ukaita zemo uri murume ukatadza kuripedza, unoita CONDITION inohi Blue Balls kureva kuti pamberi pako mabhora ako anombogwadza kukomburena kuti sei tisina kuwana mukana wekubudisa urume.
Isuwo tinoita BLUE BALLS yechikadzi asi kuti yedu inotora nguva yakareba. Uke rhojewa murume akapedza iwe usina, zvinotoda kuti akubatsire upedzewo. Ukasadaro unohwa kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kwenguva refu. Varume, kana wakamboita Blue Balls whisisa kuti ndizvo zvinoita mukadzi wako zuva nezuva. Mapahwa here?
Kana uchihwa musoro, ukarhojana nomurume kusvika pakuita orgasm, musoro unopora kusina kupera 10 minutes.
Inonetsa kuita nokungopinzwa chombo chete asi pakawanikwa zvimwe inokwanisika. Kana mese muchida kugutsana mukaudzana zvokuita mukazviita mukadzi anokwanisawo kuguta kusvika panodiwa.
Kukura zera nokugarorhojana nomunhu umwe chete kunowedzera kuita orgasm. Zvinoreva kuti mukadzi ane makore 30 chanzi yake yopkuita iri pamusoro peyemukadzi ane makore 25.
Magarire emukadzi nemafungire ake anoita kuti aite kana kusaita orgasm. Kana asina mufaro zvinonetsa kuita. Kune vanhu vakawanikwa pamisha ine zvibinge pese pese. Vanhu vakadai zvinokwanisa kuvanetsa. Mukadzi ane STRESS haanakigwi.
Kuhwisisa kwemurume kunowedzera chanzi yokuita orgasm. Murume anoziva kuti mukadzi anofanirawo kusvika chinhanho ichi anobatsira mukadzi wake. Kubatsira kukuru kunonoka nokunonoka nokunonoka kusvika mukadzi apfidza.
Zvinohi vakadzi vakawanda vasingaiti orgasm, vakasangana nomurume anosvika 10-20 minutes pakuisana, uye ane rudo nezheve dzokuterera zvinotaugwa nomukadzi, vanosvikawo, zvinoreva kuti varume vedu vane nyaya inoda kugadziriswa.
Mukadzi akazvibatabata kubva ari mudiki achizvisvitsa paorgasm ega, akazowana murume anokasira kutanga kusvika nomurume kana murume wacho achihwisisa nyaya yevakadzi mamirire ayo. Mukadzi asingazivi muviri wake kuti unoda chii haakwanisi kuudza fungwa dzake kuti amirira kunakigwa.
Kurerusa muviri kuti ugamuchire chombo norudo gwemurume zvinobatsira muviri kugamuchira nokupa zvisina dzimwe nyaya.
Kusasvika pa orgasm hazvirevi kuti hauzosviki pane imwe nguva. Unokwanisa kusvika makore akawanda usina kumbozviita asi umwe musi zvongozoitika.
Hwisisa kuti kusaita Orgasm hazvirevi kuti hausi kunakigwa asi kuti i EXPERIENCE inonaka zvokuti kana wambooita, unozoida kakawanda.
Ukatanga hupenyu hwerhoji nomurume wawakagadzikana naye anoti muchiisana unosvika pa orgasm, ukazombana naye ukadanana negino risingahwisisi kuti mukadzi anoitwa sei uye risina hanya nazvo, Relationship yenyu haigari nguva refu, even makaroorana. Ukabvunza vakadzi vanohurira varume kuti vanozviitirei, unowana kuti chimwe chezvavanotaura ndechokuti murume haana hanya nokunakigwa kwemukadzi wake.
Vakadzi vakawandisa vanoita Orgasm vega murume avata apedza kushandisa mukadzi kuita yake ega mukadzi asina. Iyi ndiyo nyaya yaunohwa kakawanda chose. Zvinoreva kuti mukadzi anokwanisa kuita asi murume haasi kumupa chanzi. Ari kumukasirira.
Vanhu mese varume nevakadzi, hwisisai kuti iyi inyaya huru chose mudzimba.
Varume vasingaiti Orgasm:
Kune varume vashomanana vasingatundi urume pakurhojana nomukadzi. Anoti chombo chimire mukadzi ari kugamuchira asi iye murume anokoira kutobuda ziya asi pasina chinobuda. Izvi zvinonakira mukadzi wake chose asi iye hapana chaanowana. Ichi chigwere chinotozikamwa chinohi DSM-IV. Kazhinji muvarume vakadai zvinoitika kuti kana ari ega anokwanisa kubudisa urume asi kana ava nomukadzi hapana chinoitika.
Zvinohi varume vakadai vanotyiswa nezviito zvavo kusvika pakuti zvinokanganisa kudanana kwavo nevakadzi vavo zvinova zvinowedzera STRESS. Stress iya yowedzera kusakwanisa kubudisa urume. Nyaya iya yobva yawedzera kuitika kwayo vanhu vopedzisira vopokana nazvo asi isiri mhosva yomurume kana mukadzi.
Mukadzi ane murume akadai anofanira kuva munhu anohwisisa nokuti varume vedu mazuvano vanhu vanoshanda mabasa ane puresha yakawanda zvokuti vamwe vavo vanokwira BP uye havavati zvakanaka. Muviri wemukadzi kana murume haudi kugaro piwa ABUSE yakawanda saka napo napo zvimwe zvange zvichishanda zvinomira kushanda.
Ukahwisisa kuti haisi mhosva yake, unokwanisa kutaura naye murudo, mobvumirana kubatsirana kutsvaka chikonzero uye kuchibvisa. Pavarume vedu, chinhu chinogwadza moyo kuti uku ari kutadza kukupa urume uku ari kuhubudisa pakutamba ega. Chikuru kuhwisisa kuti haasi kuita maune uye kuti kusakupa urume hazvirevi kuti haachakudi. Kana murume asisakudi haavati newe.
Kubata mukadzi zvakanaka
Nyaya iyi inotondinetsawo. Wangu mukadzi haatombo svika pakuita orgasm. tava nemakore anokwana 3 tichigara tese asi haasati amboita orgasm.Ndakambotaura naye kuti adzidze muviri wake ozondiudza zvaanonyatsonzwa zvichimuitira asi iye hazviite kuti afarise patino rojana. Kutadza kwangu here kana pane zvakakanganisika pamuviri wake?
Pane zvakawanda zvinoda kuhwisisiwa pamusoro penyaya iyi. Chikuru ndechokuti vashoma vanhukadzi vanosvitswa nokupinzwa chombo chete. Varume zvinovanetsa kuhwisisa nokuti ivo hazvivanetsi.
Zera romukadzi futi rine basa. Vamwe vanozotanga vava kuma 30 plus. Kotizve iye mukadzi anokwanisa here kuzvisvitsa ega.
27 April 2013 at 05:06
Apo mabetsera nenyaya yamatopakurira iyo. Ini ndinedambudziko rekusa buditsa urume kana ndiri mukati memukadzi, navadzimai tinogona kuitana zvehour rese pasina kubuda chinhu. Kuti ndisvike vanotoita zvekezondiyamwa chombo. Pane zvandingaita here kuti ndigonewo kubuditsira mukati mavadzimai?
Mazoti zii, Manyarara kwenguva. tamirira zvimwe zvidzidzo.
Vangu mukadzi ane 24 years. haakwanisi kuzvisvitsa ega nekuti haana hanya nezvese zvingango enderana ne kufarisa pangave pa bonde kana iye ega kana kuona mafirimu akarerekera ku ma adult movies. zvitori kure naye zvese izvozvi.
Blog renyu randidzidzisa zvakawanda amai....iii ndatenda hangu. Kwangu kumba baba vari kungodetemba zuva nezuva baba. Rambai makadaro. Ndiudzeiwo kuti chii chandingaite nemagaro angu zvingafadza baba.
Kana wati magaro uri kureva chiuno here. Enda uverenge pakahi "CHIKAPA" apo
Ndinobvumirana nemi kuti mukadzi ane stress haanakigwi, chero murume ane stress wo chombo hachisevenzi. Mazuva andaitambura basa ku Joni mumba manga musina moto asi pandakariwana basa, tavakugarawo pedu tega, tava nemota, tava kudyawo michero ne ma oysters, haa moto jee mumba,uye tinosvitsana kuma pena. Not kuti mukadzi wangu anokara mari kwete, asi the reality is kana mumba musina chokubata, bonde harinaki zvachose nekuti pfungwa dzinenge dzisina kutambanuka!
Mazuvano Stress mumba dzakawanda nenyaya yemabasa, zvikwereti, kushaya mari yevana vechikoro, kudzidza, Kurera vana, Kushaya mbereko, Vavakidzani, kuhurigwa nomurume/mukadzi. Kusataudzana, kuda zvinhu zvausingakwanisi kutenga. Kuita mimba yausingadi, kufunga kuti murume/mukadzi haachakudi.
Zvakawanda zvinoitisa STRESS asi victim yokutanga iRHOJI yenyu. Wana mukana wekudzikisa STRESS mumba.
murume wangu anongosvika pakutunda inn ndiridry pasina chandonzwa ndibatsireiwo kut pane zvandingaite here kut tinakirwe tese coz hapana chinondinakidza pabonde
Murume wako ndiye anotoda rubatsiro kuti ahwisise kuti kunakigwa kwemunhukadzi kunobva pakunonokegwa kupiwa urume. Unofanira kudzidzisa murume kunonoka uye kuti apinze wanyorova. Mukamboita nguva muchikisana nokubatana nokupurudzirana murume achimbopinza zvigumwe mukati achikwenyereramo iwe uchimuudza zvokuita, ukuwo achimbokwizirira bhinzi yako, unonyorova. Ukuwo iwe purudzira chombo chomurume nokuchirezva uchitaura zvaunoda kuti murume aite nacho kuti azive.
Zvadaro akapinza chombo, musangotanga kukoirana, imbodzidzai kumboita nyaya makapindana kudai asi pasina anokoira. Pamwe motombopatsana futi motambisa nemaoko, Mopinzazve motamba musingakoirani. Zvinoita kuti chombo chomurume chinojaira kudziya kwemukati mako kuzoti pakukoira anonoka kudiridzira urume.